subin, Author at Everest Uncensored
सुविन श्रेष्ठ/ललितपुर मनका लहर पानीमय भएका छन् । परिवेश र समय होलीमय बनेका छन् । रंगीन शुभकामना अनि उत्साहहरु रंगमय देखिएका छन् । हुनपनि निकै समय पश्चात् होली दैलौमा टेकेको अनुभव संगालीरहेको छु । “तरपनि होली रंगविहिन बनेपनि मनविहिन हुनुहुन्न । खाली बैलुन र नभरिएको प्लाष्टिकले होली खेल्ने त होला नी । ख्वै पानी ? […]
LeaveaComment on पानीमय शहर र होलीको निशाना
सुविन श्रेष्ठ पशुपतिनाथ उसैपनि चर्चामा आईरहन्छन् । कहिले भेटी विवाद कहिले भने पुजारी नियुक्तीको कुरा । पशुपतिनाथले जे भए’नि जसोगरे’नि सहेका छन् । त्यही चरणलाई बिस्रेर लाखौ दर्शनार्थीहरु शिवरात्रीको मध्यरात देखि ओइरिए पशुपतिको दैलौ टेक्न । भीड पनि जुलुश जस्तै । लथालिङ्ग र अव्यवस्थित । पशुपति प्रवेशका लागि मात्र लाईनको व्यवस्था । बाहिर चोक अनि […]
LeaveaComment on चोरमार्गबाट पशुपति दर्शन र हराएको मोबाईल
विदेशमा पैसाको रुख छैन !
हजारौका मनमा हजारौ सपना हुन्छन् । सपनाका सयौ क्रमहरु उतार चढाव भईरहन्छन् । एक मान्छेका एक सपना मात्र भए पो पुरा हुने सम्भावना हुन्छ । एकका अनेक सपनाहरुले मान्छेलाई राजधानीको असनमा हराएको जस्तो अलपत्र पार्देछ । हाम्रो देशका अधिकाश युवाहरु विदेशिने होडबाजीमा रहन्छन् । राम्रो घरानाका राम्रै देशमा अनि बाँकी रहेकाहरु छानी छानी । त्यो […]
News bidesh, money, plane, Qatar, Subin Shrestha
LeaveaComment on विदेशमा पैसाको रुख छैन !
ब्लग ब्यस्तता, युनिकोड एजेन्डा र १५ घन्टे निद्रा
ब्लग अर्थात व्यक्तिगत विचार । online diaires । खुल्ला विचारशैली । त्यस्तै आफ्नो सोचको शब्द कलाकारिता पनि हो । आधुनिकता चुलिएको समकालीन शहर समाजमा साचार आबद्ध यो ब्लग नशा लहर व्यापक छ । ब्लग शैलीको आदानप्रदान विचार र सोच शैलीको प्रस्तुतीकरण पनि हो । यता वर्ड प्रेससँगको नजिकता यस्तो बढेको छ कि जतीबेला पनि आफ्नो […]
Memoir journalist, Lalitpur, story, Subin Shrestha, सुबिन श्रेष्ठ
LeaveaComment on ब्लग ब्यस्तता, युनिकोड एजेन्डा र १५ घन्टे निद्रा
एकदिन सबैलाई माटोले खान्छ
सुविन श्रेष्ठ subin.photojournalist@gmail.com 00977 9841 882687 शब्दहरु शुरू गर्ने पनि कठिनाई भईरहेको छ। यतिखेर मन र मतिष्कपनि समान स्थितीमा छन्। मन हिजैबाट टुक्रिएको छ। आङ्ग134नै मान्छेले जब दुई शब्द लिखित खबर पठायो। टिभीमा संसार ध्वस्त हुन्छ भनेको छ। हाम्रो भेट त हुन्छ? भगवानको मर्जी। अनि मन एक्कासी चिसो भयो। म आफैमा ढलेको महसुस भयो। आफुलाई […]
Opinion Subin Shrestha
LeaveaComment on एकदिन सबैलाई माटोले खान्छ